आजको राशिफल, २०७७ पुस १५ गते, बुधलवार, ३० डिसेम्बर २०२०। मार्ग शुक्लपक्ष, पूर्णिमा तिथि, आर्द्रा नक्षत्र, चन्द्रराशि– मिथुन। - समय-समाचार
(Thursday, 28th January 2021)
आजको राशिफल, २०७७ पुस १५ गते, बुधलवार, ३० डिसेम्बर २०२०। मार्ग शुक्लपक्ष, पूर्णिमा तिथि, आर्द्रा नक्षत्र, चन्द्रराशि– मिथुन।
१५ पुष २०७७, बुधबार ०७:५३
२०७७ पुस १५ गते, बुधलवार, ३० डिसेम्बर २०२०। मार्ग शुक्लपक्ष, पूर्णिमा तिथि (८ः४५ बजेदेखि पाैष कृष्ण प्रतिपदा), आर्द्रा नक्षत्र, चन्द्रराशि– मिथुन।उपप्रा. लक्ष्मीप्रसाद बराल (फलितज्योतिषाचार्य) ९८४१३५२१६४
मेष – ARIES चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ
परिस्थितिवश चिताएको काम रोकिन सक्छ। आफ्नो मिहिनेतबाट अरूले फाइदा उठाउने चेष्टा गर्नेछन्। मौका आए पनि काम थाल्नुअघि राम्ररी विचार पुर्याउनुहोला। व्यवसायमा अरूका लागि बुद्धि खर्चनुपर्ने देखिन्छ। सेवामूलक कामबाट सामान्य उपलब्धि प्राप्त हुनेछ। ठूलो फाइदा नदेखिएकाले लाभ उठाउन हतार नगर्नुहोला।
वृष – TAURUS इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो
मिहिनेतले मानसम्मान दिलाउनेछ। बोली र विचारका प्रशंसकहरू बढ्नेछन्। बुद्धिको उपयोगले विद्या तथा धन आर्जन हुनेछ भने सानो प्रयत्नले ठूलो काम बन्नेछ। प्रतिष्ठित काम गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। सहयोगीहरूले साथ दिने हुँदा रोकिएका काम पनि सम्पादन हुनेछन्। लगनशीलताले नाम, दाम र इनाम हातपार्न सफल भइनेछ।
मिथुन – GEMINI का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह
साथीभाइको आगमनले दिन मनोरञ्जनपूर्ण हुनेछ। रमाइलो जमघट एवं भोजभतेरको अवसर प्राप्त हुनेछ। पहिलेका कमजोरी सुधार्दै जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउन सकिनेछ। पहिलेको सफलताले थप हौसला जगाउनेछ। नयाँ कामको प्रस्ताव आउनेछ भने सहयोगीहरू प्रशस्तै भेटिनेछन्। बिछोडिएका परिवारजनसँग भेटघाट हुनेछ।
कर्कट – CANCER हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो
छर–छिमेकमा केही असमझदारी देखिए पनि टाढाका साथीभाइसँग आत्मीयता बढ्नेछ। अवसरको खोजीमा केही दौडधुप गर्नुपर्ला। खर्च लागे पनि दिगो काम प्रारम्भ हुनेछ। चुनौतीहरू पन्छाउँदै रोकिएका काम बनाउन सकिनेछ। यात्रा गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ। प्रतिस्पर्धीहरूले हार खानेछन् भने वैदेशिक क्षेत्रबाट लाभ मिल्नेछ।
सिंह – LEO मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे
केही काम रोकिनाले रकम हातलागी नहुन सक्छ। उद्योग र व्यापारमा पनि कम मात्र फाइदा हुनेछ। समय लागे पनि विगतका कर्मको उचित फल प्राप्त हुनेछ। तर आफ्नो श्रमबाट अरूले फाइदा उठाउने चेष्टा गर्नेछन्। पुरानो समस्याले सञ्चित रकम खर्च गराउन सक्छ। चल-अचल धनको उपयोगबाट आंशिक फाइदा उठाउन सकिनेछ।
कन्या – VIRGO टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो
सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै लाभदायक जिम्मेवारी हात पार्ने मौका छ। तारिफयोग्य कामले धेरैको मन जित्न सकिनेछ। समुदायको हितमा राम्रै काम गर्न सकिनेछ। टाढिएका साथीभाइ नजिकिनाले हर्ष बढ्नेछ। भाग्यले विभिन्न अवसर थमाउनेछ। उपलब्धिको स्रोत पहिल्याउन सकिनेछ। अरूको काममा जुट्नुपरे पनि फाइदा आफैंलाई हुनेछ।
तुला – LIBRA र, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते
मिहिनेतले नयाँ जिम्मेवारी दिलाउनेछ। तारिफयोग्य कामको चर्चा हुनेछ। दिगो फाइदा हुने काम प्रारम्भ हुन सक्छ। तर आफ्नो श्रमबाट अरूले फाइदा उठाउने चेष्टा गर्नेछन्। अरूकै लागि बुद्धि र समय खर्चनुपर्ला। सामाजिक उत्तरदायित्व प्राप्त भए पनि लक्ष्यमा पुग्न समय लाग्नेछ। परिस्थितिवश चिताएको काम बीचमा रोकिन सक्छ।
वृश्चिक – SCORPIO तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु
सामान्य कामका लागि धेरै दौडधुप गर्नुपर्नेछ। तत्काल फाइदा नहुने काममा जुट्नुपर्ला। ठूलो भागको आशा राख्दा भएको वस्तुसमेत गुम्न सक्छ। स्वास्थ्यसम्बन्धी चिन्ताले पनि सताउनेछ। ईर्ष्या गर्नेहरूले काममा अवरोध पुर्याउन सक्छन्। आफ्ना कामबाट अरूले फाइदा उठाउने चेष्टा गर्नेछन्। हुलमुलमा धनमाल जोगाउन सजग रहनुहोला।
धनु – SAGITTARIUS ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भे
पहिलेको सफलताले हौसला जगाउनेछ। नयाँ कामको प्रस्ताव आउनेछ भने साथ दिनेहरू बढ्नेछन्। काम बन्नुका साथै धनलाभ हुनेछ। बिछोडिएका आफन्तजनसँग रमाइलो भेटघाट हुन सक्छ। प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिलो हुनेछ। विगतका कमजोरीलाई पनि सुधार गर्ने मौका छ। तर अधैर्य व्यवहारले आत्मसम्मानमा बाधा पुर्याउनेछ।
मकर – CAPRICORN भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि
परिस्थितिवश आँटेको काममा विलम्ब हुनेछ। तापनि प्रयत्न गर्दा फाइदाका स्रोत पहिचान गर्न सकिनेछ। केही चुनाैती देखिए पनि शत्रुहरू किनारा लाग्नेछन् भने प्रतिस्पर्धामा विजयी भइनेछ। साहसी काम गरेर प्रशस्त लाभ उठाउन सकिनेछ। नयाँ योजनातर्फ अग्रसर भइनेछ। अरूको विश्वास जित्न समय लागे पनि फाइदा हुने काम हातलागी हुनेछ।
कुम्भ – AQUARIUS गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, द
अस्वस्थताका बाबजुद कामको जिम्मेवारी बढ्नेछ। नयाँ काम थाल्न केही समय पर्खनुपर्ला। गरी आएको कामलाई निरन्तरता दिन सकिनेछ। पछाडिबाट अवरोध पुर्याउनेहरू सक्रिय रहे पनि शुभचिन्तकहरूले साथ दिने हुँदा काम बन्नेछ। अध्ययनको लगावले बौद्धिक क्षेत्र फराकिलो बन्नेछ। मेहनतले प्रतिष्ठित काम सम्पादन गर्ने मौका दिलाउनेछ।
मीन – PISCES दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि
केही समय लागे पनि बुद्धि लगाउँदा लक्ष्य पहिल्याउन सकिनेछ। साथीभाइले साथ दिनेछन्। व्यापारमा धेरै फाइदा नभए पनि पशुपालन तथा कृषि क्षेत्रबाट राम्रो लाभ मिल्नेछ। मान्यजनको साथ सहयाेग जुट्नेछ। राेकिएकाे काम गर्न सकिनेछ। तर बेसुरमा वचन दिनाले दुःख पाइनेछ। साझेदारीमा देखिने समस्याले पहिलेको सम्झौता भंग हुन सक्छ।
हामीलाई तपाईहरुको सल्लाह र सुझाब दिनुहोला जसले गर्दा हामीले यो पत्रकारिता, लेखन र साहित्यको क्षेत्रमा अझ राम्रो गर्न सकौ। यहाँहरुका लेख तथा रचनाहरु छन् भने पनि हामीलाई पठाउनुहोला । छापिन योग्य रचनाहरु हामी छाप्ने छौ । सम्पर्क इमेल : sendyourarticle@samayasamachar.com
पहिलो दिन ९ हजारभन्दा बढीले लगाए कोरोनाविरुद्धको खोप ‘कोभिशिल्ड’
१४ माघ २०७७, बुधबार २१:२३
ज्वराे आएपछि किन हुन्छ टाइफाइड ? यस्तो छ यस्तो लक्षण र बच्ने उपायहरू
१४ माघ २०७७, बुधबार १४:०२
कोरोना विरुद्धकाे खोप अभियान सुरू, प्रधानमन्त्रीद्वारा उद्घाटन, पहिलाे खाेप डाक्टरले लगाए
१४ माघ २०७७, बुधबार ११:३५
कोरोनाविरुद्धको लडाइ नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको दावी
१४ माघ २०७७, बुधबार ११:११
दक्षिण कोरियामा बिरालोमा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि
१४ माघ २०७७, बुधबार ११:०९
६ महिनापछि डब्लूएचओमा पुनः समावेश भयो अमेरिका, बाइडनको यो फैसलाले के परिवर्तन होला ?
१४ माघ २०७७, बुधबार ०९:५७
विभिन्न राष्ट्रिय दैनिकका पहिलो पृष्ठमा के के छापिए ? (फाेटाे फिचर)
१४ पुष २०७७, मंगलवार ०८:५५
२४ मंसिर २०७७, बुधबार ०७:०२
२८ कार्तिक २०७७, शुक्रबार ०७:३५
कात्तिक २४, साेमबार । विभिन्न राष्ट्रिय दैनिकका पहिलो पृष्ठमा के के छापिए ?
२४ कार्तिक २०७७, सोमबार ०७:२३
बिहानी बिगारेर दिन खराब पार्ने कि बिहानैदेखि राम्रो दिन तय गर्ने, तपाइँकै हातमा छ, यसरी राख्नुहाेस दिनलाइ शुभ
१४ माघ २०७७, बुधबार ०६:१४
सर्वोच्चले गर्‍यो प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अपहेलना मुद्दा दर्ता
१३ माघ २०७७, मंगलवार १५:१८
नागरिक एपमा डेटा निःशुल्क गरिँदै
१२ माघ २०७७, सोमबार ०८:५०
मुख्यमन्त्री शेरधन राई र जाङ्मु इन शेर्पा विवाह बन्धनमा बाँधिए
११ माघ २०७७, आईतवार १४:४५
कुश्माको बन्जी र स्वीङ कार्तिक १५ गतेबाट सन्चालनमा आउने
१३ कार्तिक २०७७, बिहीबार १५:१४
७ कार्तिक २०७७, शुक्रबार ११:५७
२ कार्तिक २०७७, आईतवार २२:०९
२७ आश्विन २०७७, मंगलवार १५:४८